« Salon du livre Athéna » : mandray anjara i Jean-Luc R. sy i Tao Ravao | NewsMada
« Salon du livre Athéna » : mandray anjara i Jean-Luc R. sy i Tao Ravao
Tontosaina any Saint-Pierre atsy amin’ny Nosy La Réunion, nanomboka ny alarobia teo, ny « Salon du livre Athéna ». Anisan’ireo maneho ny talentany, mandritra ity hetsika ity, i Jean-Luc Raharimanana, mpanoratra fanta-daza, indrindra eo amin’ny mpiantsehatra amin’ity tontolo ity any ivelany any, sy i Tao Ravao, mpanakanto teratany malagasy, monina any ampitan-dranomasina ihany koa.
« Salon du livre Athéna », hetsika mahakasika ny boky, fanao isaky ny roa taona, ao amin’ity tanàn-dehibe ity, ary andiany fahatelo ny amin’ity taona ity. Maharitra efatra andro kosa ny hetsika. Manana ny mampiavaka azy amin’ireo fanentanana mahakasika ny boky ity « salon » ity. Tsy mijanona amin’ny fampirantiana sy hetsika enti-manome lanja ny boky ny fandaharam-potoana fa natao ho fetibe mihitsy. Marobe ireo fomba fanehoana ny kanto sy ny kolontsaina marolafy atosaka hankafizin’ny mpitsidika.
Araka izany, tsy latsa-danja ny mozika sy ny fampisehoana an-tsehatra mandritra ny “salon”. Anisan’ireo manafana izany ry Jean-Luc Raharimanana sy i Tao Ravao. Omaly maraina, nihanoka ny kanton’izy ireo ny mpianatra amina sekoly notsongaina manokana. Natao ho an’ny mpitsidika ny hetsika kosa ny seho hotanterahin’izy ireo, anio tolakandro.
Mahaliana ny fiaraha-miasa eo amin’ireto mpanakanto malagasy roa ireto, indrindra eo amin’ny fampiroboroboana ny boky sy ny asa soratra, amin’ny ankapobeny. Matetika anefa, any ivelany any hatrany izany. Antenaina ny hanatanterahan’izy ireo hetsika toy izao aty an-tanindrazana.